‘အမေ’ လို့ ခေါ်နေကြတဲ့ သူစိမ်းအမျိုးသမီးကြီးအကြောင်း – Shwe Thadin
‘အမေ’ လို့ ခေါ်နေကြတဲ့ သူစိမ်းအမျိုးသမီးကြီးအကြောင်း ၁၉ . ၆ . ၁၉၄၅ မနက်သုံးနာရီ သုံးဆယ့်ငါးမိနစ်မှာ စတင်လင်းလက်ခဲ့တဲ့ကြယ်
အမှောင်ဘယ်လောက်ဖုံးဖုံး တိမ်ဘယ်လောက်အုပ်အုပ် အလင်းလည်းပေးတယ်၊ လမ်းလည်းပြတယ် ဘယ်တော့မှကြွေကျမှာမဟုတ်ပေမယ့်
ကျွန်တော်တို့ကို ခဏခဏကြွေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကြယ်၁၉၈၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၂၆ရက် တွေ့လား ရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုခ်မှာ မြင်လား အဲ့ဒီကလေးမ ဒါ နိဒါန်းပဲ ၊ အဖေ့တာဝန်ကိုဆက်ခံပြီ အာရှသူရဲကောင်းသီချင်းကို
အော်ဆိုရင်း ဒီအမျိုးသမီးကို သူရဲကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးမှာ ဆုတောင်းစရာမလိုခဲ့ဘူးစက်တင်ဘာ ( ၂၇ ) ၁၉၈၈ ဒီအရှုပ်တွေဇာတ်သိမ်းဖို့ ဒီချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီ ဒီအတွင်းရေးမှူးမကအိပ်မက်ဆိုးတွေကို လှုပ်နှိုးပေးလိမ့်မယ်
မောင်းတင်စရာမလိုပဲ ပြည်သူ့နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်သွားလိမ့်မယ် ဂရုစိုက်ကြ စောင့်ရှောက်ကြ … ဒီကလေးမက သူ့အဖေလိုပဲ တစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းအရမ်းမာတယ်၁၉၈၉ ဇူလိုင်လ ( ၂၀ ) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကိုဖြတ်တိုင်
သူ့ကိုအားနာတယ် … ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ဖို့ သူ အတုပ်အနှောင်ခံထားရတယ်အဲ့ဒီကာလတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် နှလုံးသွေးတွေရပ်တန့်သွားသလို မျှော်လင့်ချက်တွေသေသွားသလို တိတ်တိတ်လေးဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ် ..
ကောင်းကင်မှာဝဲပျံနေတဲ့ ငှက်တွေကိုကြည့်ရင်း ၁၉၉၁ အောက်တိုဘာ ( ၁၄ ) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ..ဂုဏ်ယူတယ် ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက် သူကပြယုဂ်ကြီးပါ …မှေးမှိန်အောင်လုပ်ထားပေမယ့် လင်းလက်နေဆဲပဲဆိုတာသိလိုက်ရ
တော့ သေနတ်တွေတောင် ခေတ္တခဏ ကျည်အ သွားခဲ့ရတယ်၃၀ . ၅ . ၂၀၀၃ မေမ့ဘူး … မေ့လို့မရဘူး သွေးပျက်စရာကောင်းပေမယ့် ဒီအမျိုးသမီးက ပန်းပန်မပျက်ခဲ့ဘူး …ထိုးချိန်ခံထားရတဲ့ပြောင်းဝတွေရှေ့မှာ ဧကရီထိပ်ထားက တစ်ချက်မမှားခဲ့ဘူး
ဒီပဲယင်းရေ … မင်းမြေကိုနင်းလိုက်တိုင်း ဒီအာဂအမျိုးသမီးကို အကြိမ်ကြိမ်ဦးညွတ်မိတယ်ဟုတ်တယ် … ခင်ဗျားထင်လား ပန်းသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဒီမိန်းကလေး ဒီလောက်မာကျောမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား လာလေ … တိုက်ကြ တိုက်ကြ ဟေ့
စကင်ဒီနေဗီးယန်းက ကျောက်ဆောင်ကွ …ကျွန်မက အရိုင်းသမီးပါဆိုပြီး ဝံပုလွေတွေကြားထဲ ကျားရဲတစ်ကောင်လို ရှင်သန်နေတဲ့အမျိုးသမီးကျွန်မက မိသားစုအပေါ်မှာ တာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဆိုပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီး
ကျွန်မက သူတို့အတွက်အမေပါဆိုပြီး အဆိပ်တွေကိုမျိုချ ပျားရည်တွေကိုအန်ထုတ် နှလုံးသွေးတွေနဲ့ လမ်းခင်းပေးတဲ့ အမျိုးသမီးလှုပ်နှိုးပြီးပြလိုက်ချင်တယ် ထကြည့်ပါဦးဗျ ကိုအောင်ဆန်း ခင်ဗျားသမီးလေးစုကို ခေါ်နေကြတယ် အမေ တဲ့။
ရေမွန် ချစ်သူက ရေမွန်မိသားစုဆီ hotpotဖိုး၃သိန်းပြန်တောင်းတဲ့ သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေ